5 सर्वश्रेष्ठ स्थानीय पेय दारू अनि युरोप मा प्रयास गर्नुहोस् लागि | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5सर्वश्रेष्ठ स्थानीय पेय दारू अनि युरोप मा प्रयास गर्नुहोस् लागि
युरोप धेरै को एक अद्भुत बैठक ठाउँ छ विभिन्न संस्कृति - र पाक परम्परा. हरेक राष्ट्र यसको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ, जो सही यसको इतिहास र यसलाई प्रदान गर्दछ अरू सबै कुरा मा आगंतुकों ड्र. र केही देशहरूमा, पनि flavorful पेय अर्थ!
जो यात्रा तपाईं ती आफ्नो तालु उतेजित गर्नु र केही स्थानीय स्वीकृत मजा यी देशहरूमा गएर पाउनेछन् छ. यहाँ हाम्रो शीर्ष छन्5पिउन र युरोप मा प्रयास गर्न सबै भन्दा राम्रो स्थानीय पेय:
1. सर्वश्रेष्ठ स्थानीय पेय इटाली: Limoncello
Limoncello एक अद्भुत इटालियन आविष्कार तपाईं यस मार्फत सबै पाउन सक्नुहुन्छ सुन्दर देश. तथापि, तपाईं आफ्नो सर्वश्रेष्ठ यो हल्का कागति रक्सी प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ भने, अमाल्फी टाउको. त्यहाँ, सुन्दर मा अमाल्फी तट, तिनीहरूले इटाली को सबै भन्दा राम्रो कागति देखि limoncello बनाउन. मूल नुस्खा मात्र अलिकति मिठाई छ कि एक खुशबूदार कागति पानी जस्तै यो पेय स्वाद बनाउँछ. तथापि, बिस्तारै र ध्यानपूर्वक यो SIP, यसको बल आश्चर्य द्वारा लाग्न सक्छ किनभने.
पम्पी गाडिहरु गर्न नेपल्स
2. बरद सर्वश्रेष्ठ स्थानीय वाइन - फ्रान्स
एक रक्सी प्रेमी लागि, सबै भन्दा राम्रो स्थानीय पेय को एक निश्चित बरद रक्सी हुनेछ युरोप मा प्रयास. यो एक प्रसिद्ध फ्रान्सेली निर्यात तापनि, यो पक्कै पनि यो उत्कृष्ट रक्सी नमूना एउटा अनुभव छ, जबकि बरद मा. एक रक्सी भ्रमण छ अन्वेषण गर्न सिद्ध तरिका क्षेत्र र यसको मदिरा. के थप छ, तपाईं रक्सी बनाउने बारेमा धेरै कुरा सिक्न हुनेछ, भव्य chateaus, र microclimates.
3. Pimms कप - इङ्गल्याण्ड
तपाईं लण्डन आफैलाई पाउन भने गर्मीयाम मा, तपाईं बस नमूना बिना छोड्न सक्नुहुन्न Pimms कप. यो मध्य 1800 मा पेय आविष्कार गर्ने जेम्स Pimm थियो, र उहाँले जो आफ्नो नाम lent एक ठूलो कप मा सेवा. यो Fizzy कागति पानी र Pimms कुनै जोडती एक ताजा पेय छ. 1, साथै फल स्लाइस र टकसाल sprigs रूपमा. बिल्कुल स्वादिष्ट, र सिद्ध एक बगैचा सेटिङ मा हल्का गर्मी दिन आनंद लागि, Pimms कप हुनेछ तपाईं आकर्षण.
एकmsterdam लन्डन गाडिहरु
4. सर्वश्रेष्ठ स्थानीय पेय जर्मनीमा: schnapps
जर्मनीमा, Schnaps स्वाद को एक किसिम हुन सक्छ कि एक बलियो मादक पेय लागि छाता शब्द छ. उदाहरणका लागि, तपाईं एक fruity Schnaps वा जडिबुटी आधारित एउटा छ सक्छ. Whichever एक तपाईँले चयन, तपाईं जर्मनी आत्मा evoke हुनेछ कि एक लोकप्रिय स्थानीय पेय भइरहेको गरिनेछ. को स्थानीय एक ठूलो पछि Schnaps भइरहेको मन, भारी भोजन, जहाँ यसको बल पाचन संग मद्दत गर्छ. त्यसैले तपाईं जर्मनी मा हुँदा, भोजमा निःशुल्क महसुस र पिउन अप!
5. Westvleteren Abbey सर्वश्रेष्ठ स्थानीय बियर बेल्जियम मा
बेल्जियम बियर पर्याय छ, सायद अझ जर्मनी छ भन्दा. तर सबै अचम्मको स्थानीय बीच बेल्जियम बियर, तपाईंको खुट्टा तपाईं बन्द दस्तक हुनेछ छ. अभय बियर, पनि Trappists रूपमा ज्ञात, बेल्जियम मा धेरै लोकप्रिय छन्, तर Westvleteren अभय बियर को rarest छ. यसलाई प्राप्त गर्न, तपाईं यो अभय देखि आरक्षित गर्न आवश्यक 60 समय को अगाडी दिन. तथापि, यो राम्रो समस्या लायक छ.
सबै भन्दा राम्रो स्थानीय पेय युरोप प्रस्ताव रमाइलो गर्न तयार? आफ्नो बैग प्याक, आफ्नो योजना बनाउन, र टाउको एउटा ट्रेन बचत गर्न पुस्तक आफ्नो रेल टिकट एक सारा फरक प्रकाश मा युरोप हेर्न!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 युरोप मा प्रयास सर्वश्रेष्ठ स्थानीय पेय” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-local-drinks-europe/?lang=ne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, र तपाईं / NL गर्न / de वा / यो र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ.
#पेय #traveleurope इटाली लन्डन ट्राभेलबिजियम travelfrance travelgermany traveltips